Ihe niile ịchọrọ ịma banyere SNES Mini ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Nintendo gara n'ihu na-arịọ arịrịọ ka anyị kpofuo akpa anyị, nwata nwoke na-eme nke ọma. Ogologo oge gara aga na Actualidad Gadget anyị wetara gị nyocha nke NES Classic Mini, ọbụnadị nkuzi dị egwu iji tinye egwuregwu karịa ka ọ na-eweta. Ma ụlọ ọrụ nke nnukwu N agaghị akwụsị ebe ahụ, ugbu a, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ mbipụta ọzọ, ọkachasị SNES Classic Mini.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere ihe obere / nnukwu njikwa a gụnyere, anyị ga-anwa ịmezi imirikiti n'ime ha. Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara SNES Classic Mini, ka anyị gaa.
O doro anya na ị nwere ezigbo ajụjụ nke ajụjụ, yabụ anyị onwe anyị, ọ bụ ya mere anyị ga-eji gaa otu otu na-edozi ọtụtụ dị ka o kwere mee.
Kedu egwuregwu ndị SNES Classic Mini gụnyere? Contra 3: Agha ndị ọbịa, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy 3, F-Zero, Kirby Super Star, Kirby's Dream Course, Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda: Njikọ Oge Gara Aga, Mega Man X, Ihe Nzuzo nke Mana , Star Fox 2, Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super Ghouls 'n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Stars Asaa, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out !! na kwa Yoshi's Island.
Kedu ihe dị n'ime igbe ahụ? Igwe HDMI, njikwa, eriri USB USB na ndị njikwa abụọ
Ndị njikwa NES dakọtara? N'ezie, ndị njikwa SNES CM dakọtara na ndị nke NES CM.
Ego ole ka SNES Classic Mini na-efu? Ihe njikwa ahụ na-efu € 79,99, na Nintendo n'onwe ya na-atụ aro ka anyị ghara ịzụta n'aka ndị na-ere ahịa n'ihi ọnụahịa na-abawanye.
Ọ na-arụ ọrụ na TV ọ bụla? Ekele ya njikọ HDMI ị nwere ike iji ya na TV nke oge a.
Banyere ọrụ na ịba uru ọ bụ otu ihe ahụ dị ka NES Classic Mini, anyị na-akwado ka ị gafere Nke a Edemede ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, mana nke bụ eziokwu bụ na menu na ndepụta egwuregwu dị n'ogo nke ngwaahịa, emehiela, ọ dị oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ndi Consolas » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara SNES Mini ọhụrụ
Igwe laser kachasị ike n'ụwa amalitela ọrụ na Hamburg